စားနေကျအစားအစာတွေကိုမှ ဆန်းသစ်တဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ သုံးဆောင်နိုင်စေဖို့…………… – FoodiesNavi
အဆာပြေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ??? ၊ အဝစားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ??? Foodies တို့အမြဲပတ်စားဖြစ်နေတဲ့ အစားအစာတွေကို ???????? တစ်ဆိုင်ဆီသွားစားနေစရာမလိုဘဲ တစ်ဆိုင်ထဲမှာရနိုင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင်အဆင်ပြေလိုက်မလဲနော်။ ??? ဒီလိုအဆင်ပြေနိုင်စေဖို့ Foodies Navi ကနေ Foodies တို့ပုံမှန်စားဖြစ်နေတဲ့ အစားအစာမျိုးစုံရရှိနိုင်မယ့် Rice Bowl Myanmar ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကို လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ ??????ဆိုင်ရဲ့လိပ်စာတွေကတော့ – ????
-Rice Bowl @ People Park – ပေါက်ကံညစျေးတန်းနှင့် စားသောက်တန်း ၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်(ဓမ္မစေတီလမ်းဝင်ပေါက်) ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ။
-Ruby Mart , ၅လွှာ ၊ Ruby Mart Shopping Mall , ကျောက်တံတားမြို့နယ် ။
Rice Bowl Myanmar မှာဆိုရင် Foodies တို့အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ?????????? ဝက်သားဒုတ်ထိုး ၊ မြေအိုးမြီးရှည် ၊ မာလာဟင်း ၊ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ ၊ လက်ဖက်ခရမ်းချဉ် ၊ ဘူးသီးကြော် ၊ ဆိတ်သားမဆလာ ၊ အကြော်စုံ ၊ ကော်ပြန့်ကြော် ၊ အသုတ်မျိုးစုံ ၊ ထမင်းသုတ်မျိုးစုံ ၊ မာလာထမင်း ၊ ဖျော်ရည်မျိုးစုံ ၊ ဂဏန်းပျော့မဆလာဟင်း ၊ တုံယမ်းထမင်းစတာတွေကို ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ ???????? ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၊ သားငါးတွေနဲ့ချက်ပြုတ်ထားပြီး သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေးသုံးဆောင်နိုင်မှာဆိုတော့ Foodies တို့စိတ်တိုင်းကျနိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။ ???
စားနေကျအစားအစာတွေကိုမှ ??????? ဆန်းသစ်တဲ့အပြင်အဆင်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး အရသာရှိရှိပြုလုပ်ထားတာကြောင့် Foodies တို့အတွက် ????? ထူးထူးခြားခြားခံစားရစေမှာပါ။ ??? Rice Bowl Myanmar ဟာ Deliverlink နဲ့ Yangon Door2Door တို့ကိုချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့် Foodies တို့အနေနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ☎️☎️☎️ 09448974671 , 09254016679 ??? တို့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ရုံနဲ့ အိမ်အရောက် Delivery Service ရရှိနိုင်တာကြောင့် အချိန်ကုန်ခံအပြင်ထွက်စရာလိုတော့ဘဲ အိမ်မှာတင်ဇိမ်ကျကျ အရသာရှိရှိနဲ့ အစားအသောက်ကောင်းတွေကို သုံးဆောင်နိုင်မှာနော်။ ???
Image Source : www.facebook.com/ricebowlmyanmar
In Restaurant Guides Tagged Cold drinks, Malar curry, Rice salads Leaveacomment